musha Africa Sanusi Lamido Sanusi Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Sanusi Lamido Sanusi Biography inoratidza Chokwadi paNyaya yehuhucheche hwake, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Vadzimai, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo. Tinokupa ngano yerwendo rwehupenyu hwake, kubva paakange ari mudiki, kusvika paakatanga kufarirwa.
Hupenyu nekusimuka kwaSanusi Lamido Sanusi.
Hongu, munhu wose anoziva iye aimbove gavhuna wenguva imwe yepakati pebhengi reNigeria uye 14 wechiEmir weKano akabvisa chigaro.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Sanusi Lamido Sanusi's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Sanusi Lamido Sanusi Nyaya Yemwana:
Iyi ndeimwe yemifananidzo yekutanga yehucheche yaSanusi Lamido Sanusi.
Kutanga kuenda, anotumidzwa zita remadunhurirwa rekuti “SLS". Sanusi Lamido Sanusi akaberekwa musi we31th waChikunguru 1961 kuKano, Nigeria kuna amai vake, Saudatu Hussein, uye baba, Aminu Sanusi muguta reKano, Nigeria.
Muhammadu Sanusi II sekudanwa kwaanowanzoitwa aive wekutanga pavana vatatu vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Akapedza makore ake ekutanga muKano, guta rinozivikanwa senzvimbo yekutengesa tsinga yekuNorth Nigerian uye yechipiri nyika ine vanhu vazhinji muNigeria (vangangoita mamirioni 9 vanhu).
Mukomana mudiki akarererwa muKano State, Nigeria.
Sanusi Lamido Mhuri Dzinobva:
Muhammadu Sanusi II anotuka kubva kurudzi rweFulani dzinza rakaberekerwa kumhuri Sullubawa mhuri.
Waizviziva here?… Sullubawa idzinza raFulani kuNorth Nigeria vane nhengo dzemhuri dzakatarwa dzeKano neKatsina. Vanonzi vanobva kuFuta Toro, mune yava kunzi Senegal (nyika yekuWest Africa).
Sanusi Lamido Mhuri Background:
Iye wekare-Emir akaberekerwa mumhuri yakapfuma-yekirasi kumashure. Semwana mudiki, ainakidzwa zvese zvakakosha uye neropafadzo dzaaida kuti abudirire.
Zvakanyanya kukosha, vabereki vaSanusi Lamido Sanusi vakaita basa rakakosha mukumubatsira kuwana budiriro yaanofarira nhasi.
Kuzvarwa mumhuri yedzinza rehumambo, Mhuri yaSanusi Lamido Sanusi yakawana mabhenefiti makuru kunyanya kubva kuNigerian colonial masters- maBritain.
Pakutanga, Sanusi akadzidziswa nezve mabasa nemabasa enhengo dzese dzeropa rake rehumambo.
Akacherekedza budiriro nenhoroondo dzema emir akapfuura kuitira kuti azvigadzirire zvakakwana kuita mabasa mune ramangwana kana zvichidiwa. Izvi zvaisangoitirwa kungoperekedza nhengo dzemhuri pamisangano yehumambo yepamusoro.
Uyu ndiye wekutanga weSanusi Lamido Sanusi Wevacheche Photo- Iye anoratidzwa pamwe naEmir Muhammdu Sanusi 1 naA Ahmadu Bello vachikwazisa vaenzi vavo vekoloni.
Mufananidzo uri pamusoro uyu hauwanzoita Mwana achiri mudiki Photo raSanusi Lamido Sanusi kwaanotaridzwa pamwe chete Emir Muhammdu Sanusi 1 (muzukuru wake) uye Ahmadu Bello (Mutungamiriri weNyakatho yeNigeria) vachikwazisa vaenzi vavo vekoloni.
Muenzi haasi mumwe kunze kwe Queen Elizabeth II uye murume wake Prince Philip panguva yekushanya kwavo kuKano muna 1956.
Sanusi Lamido Upenyu Hwokutanga:
Muhammadu Sanusi II akakurira panguva iyo Western Dzidzo yaingoteverwa chete nemhuri zhinji dzakapfuma kuNorth.
Waizviziva here?… Nhengo dzemhuri yaSanusi Lamido Sanusi vaive pakati pevekutanga kuwana dzidzo yekuMadokero mudunhu, chiitiko chakatungamira mukuumbwa kweBayero University, Kano (BUK).
Semwana mudiki, Sanusi akaona mazhinji emhuri dzemhuri yake dzakadzora yunivhesiti zvese sevadzidzi nevadzidzisi.
Kudzidza dzidzo yekumadokero kwakave kwakanyanya kudzvinyirira, sezvo Sanusi aifanira kurasikirwa nechikamu chenguva yake yekutamba kuti awane mamwe mabasa.
Kuvimba nemashoko ababa vake pane ramangwana mabhenefiti eruzivo rwekumadokero, ramangwana emir rakatora matambudziko.
Sanusi Lamido Sanusi panguva yehudiki hwake akatevera kuda kwababa vake kuita dzidzo yekumadokero.
Sanusi Lamido Sanusi Dzidzo:
Kare kumashure mune ekutanga '70s, King's Koreji yaive yakanakisa dzidzo nzvimbo yekuenda kune vakawanda vakapfuma vana vekuNorth Nigeria.
Pasina kufunga kaviri, vabereki vaSanusi Lamido Sanusi Sanusi pakutanga vakavimbisa mwanakomana wavo kubva kuKano kuenda kuLagos kuti aenderere mberi nechikoro chesekondari.
Iye akakurumbira alumnus weKing's College muLagos nyika.
Dzidzo yaLamido Sanusi yakaratidzirwa nekutsunga uye kushuvira kubudirira. Kuedza kwake hakuna kuratidza kuve kubvisa nhumbu sezvo aikwanisa kupedza kubva kuKing's College mu1977.
Pavakapedza kudzidza, vabereki vaSanusi Lamido Sanusi vaive vachiri vakatsunga kugadzirisa chimiro chemudzidzi chemwanakomana wavo. Nekuda kweizvozvo, vakamusundidzira kuti ave neruzivo rwakasiyana-siyana mubhizinesi. Izvi zvakamuona achienderera mberi nekudzidza Economics paAhmadu Bello University, Zaria.
Mugore ra1981, Sanusi akapedza kudzidza kubva kuAhmadu Bello University aine degree reBachelor muEconomics. Akazosarudza-mukati kwemakore maviri masters degree muEconomics paYunivhesiti imwecheteyo.
Basa Rake Rokutanga rakanga Rine Chikonzero:
Waizviziva here?… Sanusi Lamido Sanusi akapihwa basa rekudzidzisa neA Ahmadu Bello University paakabudirira kupedza chirongwa chedhigirii rake. Pazasi payo pikicha yemazuva ake ekutanga semudzidzisi wechidiki.
Mufananidzo usingawanzoitika waSanusi Lamido Sanusi paaiita basa rake rekudzidzisa kuABU Zaria.
Pasina kupambadza nguva, future emir akagamuchira chinopihwa uye ndokudzidziswa kweanenge makore maviri asati apfuurira kuita basa rizere rekubhanga kwehunyanzvi.
Chekutanga Bhangi Bhizinesi:
Waizviziva here?… Sanusi akatanga basa rake rebhangi mugore ra1985 paakapihwa basa neIcon Limited neBarings Bank.
Kare kumashure, aive nechishuwo chisingadzimiki chekugona kwakasimudzirwa. Kubva 1985 kusvika mid-1990s, akashanda kuIcon, mubatsiri weMorgan Guaranty Trust Bank yeNew York uye gare gare, Baring Hama dzeLondon (Barings Bank) uye gare gare, UBA.
KuUBA, Sanusi akashanda munzvimbo yezvikwereti uye yekuchengetedza njodzi uko akakura achitora nzvimbo dzakasiyana siyana dzekutarisira. Mufananidzo uri pazasi ndewechidiki uye anovimbisa mubhengi mugore ra1997.
Mazuva ekutanga aSanusi Lamido Sanusi sebhengi
Amassing a tone of maneja chiitiko, Sanusi akasimuka achienda kunzvimbo yemukuruja maneja kuUBA. Sezvo nguva ichipfuura, saizi yake inowedzera. Muna 2005, akazova nhengo yebhodhi uye maneja mukuru achiona nezve njodzi uye manejimendi management kuFirst Bank yeNigeria.
Sanusi Lamido Sanusi's Banking Career- Basa rake rakaoma rakamuona achikwira kuita nhengo yebhodhi uye director director kuFirst Bank.
Waizviziva here?… Sanusi akashanda semukuru weFirst Bank yeNigeria pamberi pekusarudzwa kwake saGavhuna weCentral Bank yeNigeria (CBN).
Kunyanya zvakadaro, aive akanonoka mutungamiri Umaru Musa Yar'Adua (NOT Goodluck jonathan) akagadza Sanusi saCBN Gavhuna pazuva 1 raJune 2009.
Sanusi Lamido Sanusi Biography - Nzira yeku Fame Nhau:
Akagadzwa sagavhuna weCBN sekusimbiswa neNigeria Seneti pazuva rechitatu raJune 3, Sanusi akatanga shanduko dzinoverengeka dzemabhengi dzakanangana nekugadzirisa chikamu chemari nekuvandudza hupfumi hweNigeria.
Chimwe chikamu chekugadzirisa kwake yaive nzira yekubatanidza, imwe iyo yakaderedza huwandu hwemabhangi eNigeria. Iyi bumbiro yakatungamira mukubatanidzwa uye kuwanikwa pakati pemabhangi nekudaro kusimbisa uye kuita kuti vazvidavirire kune vanoisa mari.
Nyaya naGoodluck Jonathan:
Sanusi akatarisana nekushoropodzwa kwakanaka uye kwakashata nekuda kwekushandisa shanduko yake mubhengi.
Mukuda kwake kukurudzira kurwisa huwori mubazi rezvemari muNigeria, akasimudza alarm paUS $ 20 bhiriyoni yeNNPC. Izvi zvakaita kuti amiswe basa neMutungamiri Goodluck Ebele Jonathan.
Kuve muridzi wemuridzo kwakaratidza kusafarira Sanusi (R) sezvo akamitiswa neMutungamiri Goodluck Jonathan (L).
Lamido Sanusi Bio - Rise kune Mukurumbira Nhau:
Kutevera kumiswa kwake nevaimbove Mutungamiri weNigeria, Ex-CBN Gavhuna akadzokera kuKano. Panzvimbo pekugumburwa, akabva kubva pasimba kuenda pasimba.
Sanusi akabhadharwa mushure mekunge asarudzwa kuti atore chinzvimbo chemhuri yake - sekuru vake, Ado Bayero, saEmir weKano.
Pakati pemakakatanwa akati wandei pamusoro pekugadzwa kwake, Sanusi - Emir Muhammadu Sanusi II - akagadzwa korona 14th Emir weKano uye mutungamiri we Tijaniyya Sufi Kurongeka, pazuva re9 Gunyana 2014.
Tarisa mhemberero yekugadzwa kwegumi nemana Emir weKano, Emir Muhammadu Sanusi II.
Achikurumidza kusvika kunguva yekunyora Sanusi Lamido Sanusi Biography, akaita ratidziro yezvakanaka zvakabudirira izvo zvakaratidza mukurumbira wake kupota nyika. Zvimwe zvacho zvinosanganisira zvinotevera;
Kutanga, Sanusi akamanikidza kumiswa kwewanano yemwana uye akadaidzira kuronga kwakaringana kwevanhu kuitira kudzikisa huwandu hwehurombo mudunhu rekuchamhembe kweNigeria. Akataura zvakare kuti barika riri kupa kuti hurombo huwedzere mudunhu iri.
Nekudaro, kurudziro yake yekuvaka zvimwe zvikoro pachinzvimbo chemasikiti kuchamhembe kwakakonzera zvirevo zvakawanda zvine nharo mukufarira kwake.
Kunyanya zvakadaro, paakagadzwa pachigaro saEmir weKano, Sanusi akanetseka nenyaya dzezvematongerwo enyika, imwe yakamuita kuti agare achishoropodza hurumende yeKano nekuda kwezvakakosheswa.
Mu2019, gavhuna wenyika yeKano, Gavhuna Abdullahi Ganduje achitsiva akagadzira emirates ina nekudaro achideredza dunhu retsika pasi pesimba raSanusi kune anopfuura gumi ehurumende dzemunharaunda munzvimbo dze10 mudunhu.
Izvi zvakateverwa nekuburitswa pachigaro kwake kwaSanusi Lamido Sanusi, chiitiko chakamuita kuti awedzere kufarirwa nevaNigeriya. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Sanusi Lamido Sanusi Michato:
Achienderera kuhupenyu hwehukama hwake, Sanusi Lamido Sanusi ave achibatanidzwa muhukama hwakati wandei. Pazasi pane zvimwe zvidimbu zveruzivo nezve hupenyu hwehukama hwaSanusi Lamido.
Ndivanaani madzimai aSanusi Lamido Sanusi?
Aimbove Emir weKano ane vakadzi vatatu. Kutanga kuenda, mukadzi wekutanga waSanusi ihanzvadzi yaEmir azvino, Alhaji Aminu Ado Bayero, uye nemwanasikana wamushakabvu Emir weKano, Alhaji Ado Bayero.
Lamido Sanusi naSadiya vakatanga hukama hwavo sevachiri kuyaruka. Hukama hwavo hwakavabvisa kubva pachimiro chechikadzi kuenda kune icho chinomirira rudo rwechokwadi.
Pazasi pane chisingawanzo kukandwa mufananidzo waSanusi nemukadzi wake wekutanga (Sadiya Ado Bayero) sezvo iye (Sanusi) akazviratidza achifarira.
Yekukanda pikicha yaSanusi nemukadzi wake, Sadiya Ado Bayero munhandare.
Sekureva kwaSanusi, mukadzi muhupenyu hwake--Sadiya, zvanga zva mbiru yekugadzikana uye zvakare mbiru yerunyararo munguva dzake dzese dzekuyedza.
Ose ari maviri shiri dzerudo dzakakura murudo sezvo ivo vakaenderera kuva nehukama hwakareba kwenguva refu. Maererano ne PmNewsNigeria, vakaroora mugore ra1988.
Heano Sanusi Lamido Sanusi akafananidzirwa naSadiya Ado Bayero. Iye ndiye hanzvadzi diki yekupa Emir weKano Aminu Ado Bayero.
Mushure memakore ane michero yemuchato naSadiya Ado Bayero, Sanusi sechitendero chinobvumidza akaramba achiroora vamwe vakadzi vaviri. Mufananidzo uri pazasi madzimai aSanusi Lamido Sanusi; Maryam, Rakiya, naSadiya Ado Bayero.
Sangana nemadzimai akaisvonaka aSanusi, (LR), Sadiya Ado Bayero, Maryam, Rakiya, naSadiya Ado Bayero.
Ndiani aive Musikana waSanusi Lamido Sanusi?
Mumaawa ekutanga aChikumi 2, 2013, iyo yePrimumTimes yakataura nezve kudanana kuri kuita pakati peiyo CBN Gavhuna, Sanusi Lamido nemudiwa wake, Mai Maryam Yaro avo vaive mutevedzeri director muCBN.
Sangana nemukadzi anofungidzirwa kuti ndiye Emir weKano akabviswa pachigaro, Mai Maryam Yaro.
Premium Times yakaburitsawo nhaurirano yerudo yakaitika pakati paSanusi nemusikana wake waaifungidzira, Mai Maryam kwasara zuva rimwe chete kuti bhodhi reCentral Bank reNigeria risangane.
Nhau dzezvekuita zvekunze kwaSanusi dzakamutsa mibvunzo yakawanda pamwe nekunzwa kwakasiyana kweruzhinji.
Ndivanaani vana vaSanusi Lamido?:
Kuroora kwaSanusi nevakadzi vake kwakakonzera kuberekwa kwevana vakati wandei. Zvinosanganisira; Khadija Lamido Sanusi, Fulani Siddika Sanusi, Ashraf Sanusi uye Shahida Sanusi.
Mufananidzo uri pazasi uchakupa tarisiro muhupenyu hwemhuri yaSanusi Lamido Sanusi. Khadija Lamido Sanusi ndiye mumwe wevakuru akataura pachena pakati pevana vake.
Tarisa uone vana vakanaka uye nemadzimai akajeka emadzimambo akabviswa pachigaro.
Sanusi Lamido Sanusi Hupenyu Hwemhuri:
Zvinowanzotaurwa kuti apuro haridonhe kure nemuti wemuapuro. Nekuwedzera, Sanusi aifanira kurarama kusvika pachiyero chehumambo kubvira paakazvarwa mumhuri yeropa ramambo.
Muchikamu chino, isu tinokupa iwe nevazhinji vabereki vaSanusi Lamido Sanusi nevamwe vese vemhuri yake.
Nezve Amai vaSanusi Lamido:
Hajiya Hafsat Aminu Sanusi (aka Hajia Anduwa kana Saudatu Hussain) amai vakanaka vane hunhu hwekugara vane hanya nekubudirira kwevana vavo.
Kunyangwe panguva yekubviswa pachigaro, amai vaSanusi vagara vachimutsigira uye anozviita kuburikidza nezvakakora uye zvakapfava.
Waizviziva here?… Amai vaSanusi Lamido Sanusi kunyangwe zera ravo rakaenda mamaira ekuwedzera kuenda nemwanakomana wavo kuutapwa (muAwe, Nasarawa) mushure mekugadzwa kwake pachigaro saEmir. Iye pasina mubvunzo amai vakakura.
Amai vaSanusi Lamido Sanusi vaivepo kwaari mushure mekubviswa pachigaro.
Kunyangwe apo mwanakomana wavo aive Emir, Hajiya Hafsat Aminu Sanusi airidza chinzvimbo chemumwe wevakuru vake vanopa mazano.
Kare kumashure, aigara kuimba yehumambo yakadaidzwa Babban Daki (imba yairehwa kuna mai ve emir). Pazasi pane amai vaSanusi Lamido Sanusi ari kutamba rake rekare chinzvimbo.
Akagadzwa pachigaro emir weKano achinamata kuna amai vake kuRoyal House.
Nezve Baba vaSanusi Lamido:
Madzibaba makuru akabereka vanakomana vakakura uye Aminu Sanusi haasi iye anosarudzika. Waizviziva here?… Ivo baba vaSanusi Lamido vaive mumiriri akamboshanda semumiriri weNigerian kuChina, Belgium neCanada.
Baba vaSanusi vakashandawo semunyori wezvese kubazi rezvekunze pamwe neCiroma yeKano.
Maererano nekutsvaga, nhamba yekutanga Munhu akafurira Sanusi nehunhu hwemaneja hwaanga anazvo nhasi ndibaba vake. Kukura pasi pemapapiro ababa vake, Sanusi akatanga dhizaini isingadzimiki yebasa rehutungamiriri.
Izvi zvakamukurudzira kuti ataure kuti ramangwana rake chishuwo chaive kuzove emir weKano. Ehe, mukomana mudiki akakwanisa kuzadzisa hupenyu hwake hwakareba kurota mumazuva ekupedzisira zvese nekuda kwababa vake vepamusoro.
Nezve Vanun'una vaSanusi Lamido:
Vabereki vaSanusi Lamido Sanusi vakazvara vana vatatu- iye, mukomana nemukadzi mwana. Vakoma vake vanosanganisira; Wambai Sanusi (munin'ina), naZainab Sanusi (munin'ina). Ivo vaviri vanun'una vaSanusi Lamido Sanusi vakaitawo zvinhu zvikuru, asi hapana nzira padyo nemukoma wavo mukuru.
Waizviziva here?… Sanusi Lamido mukoma waSanusi, Abubakar Wambai Sanusi kunge muna 2010 aive mudzidzisi wezvehupfumi paBayero University, Kano. Mugore iro, rake munin'ina, Zainab Sanusi akapihwa degree rake raTenzi kuyunivhesiti imwe chete.
Nezve Sekuru vaSanusi Lamido Sanusi:
Muhammadu Sanusi Ini ndaive sekuru vaSanusi Lamido Sanusi (kubva kudivi rababa vake). Kungofanana nemuzukuru wake, Muhammadu Sanusi ini ndaivewo emir mumazuva ake. Aive wechi 11 emir weKano asati abviswa pachigaro muna 1963.
Sekuru vaSanusi Lamido, Muhammadu Sanusi ini ndaive 11th Emir weKano.
Sa sekuru nemuzukuru, ndingati, sekuru vaSanusi Lamido Sanusi vaive nesimba rakakura mudunhu rekuchamhembe.
Muchikamu chekutanga cheSanusi Lamido Sanusi Wehucheche Nyaya, Muhammadu Sanusi I akafananidzirwa pamwe nemuzukuru wake panguva yaakagamuchira Mambokadzi Elizabeth II uyo akashanyira Kano mu1956.
Senge panguva yekunyora, hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa maererano nambuya vababa vaSanusi Lamido nasekuru nasekuru vanamai.
About Sanusi Lamido Sanusi's Relatives:
Waizviziva here?… Vamwe vevaporofesa vekutanga veBayero University Kano, ndibabamunini vaSanusi Lamido Sanusi. Izvi zvakare zvinosanganisira aimbova Provost anova zvakare babamunini vababa vake.
Vanasekuru vaSanusi Lamido Sanusi vaibatanidzwa neBayero University kubva pamazuva ayo ekutanga. Ivo vanosanganisira Muzvinafundo Shehu Galadanci (chiArabic), mushakabvu Muzvinafundo Muhammad Kabir Galadanci (Hausa), uye kunze kwavo vasingaverengeki vanababamunini nehama dzemurume paboka revadzidzi veBUK
Zvimwe zvinoti; AVM Nura Imam (rtd,) naAlhaji Tijjani Sanusi zvakare vakanaka vanakomana veKano City. Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa pamusoro paVatete vaSanusi pamwe nevazukuru vake nevaninina.
Sanusi Lamido Sanusi Hupenyu hwepamoyo:
Chii chinoita kuti Sanusi Lamido Sanusi abike?… Gara kumashure apo isu tichikupa iwe ruzivo nezve hupenyu hwega hweiye akabviswa pachigaro emir weKano kunze kwehupenyu hwake hwepamutemo. Kutanga, Sanusi's persona isanganiswa yema Leo zodiac maitiro.
Sanusi anoonekwa semumwe wevanonyanya kutaura pachena vekuNige muhofisi yeruzhinji iye achiri kushanda sagavhuna weCentral Bank yeNigeria. Kunze kwezvaanofarira mukugona muzvidzidzo, Sanusi anga achizivikanwa nekutaura zvishoma nezvezvinhu zvekuvaraidza.
Iyo Nigerian Infopedia pamhepo nhau muna Zvita 2019 inofungidzira mari yaSanusi Lamido Sanusi inokosha semari inokwana yemadhora makumi masere emadhora. Kwayakafuma hupfumi hwake kunonyanya kubva kubhangi basa rake uye zviitiko zvebhizimusi pamwe nekugadzwa kwake pachigaro saEmir weKano.
Semwe aimbova emir weKano, Sanusi airarama hupenyu hwoumbozha uye anovimbisa kuti anopa vana vake uye madzimai mararamiro akanakisa avanoshuvira. Achiri kugadzwa pachigaro chekutonga, Sanusi akazvitengera Roll Royce iyo yaikosha madhora zviuru makumi matatu nemashanu.
Sezvo panguva yaaive Emir, mota dzaSanusi Lamido Sanusi dzinosanganisira; 1952 Model Rolls-Royce Sirivheri Wraith (kumusoro kuruboshwe), Roll-Royce Phantom VI (pazasi chaipo), Roll-Royce Phantom VII (pasi kuruboshwe).
Motokari dzaSanusi Lamido Sanusi -1952 Model Rolls-Royce Silver Wraith (kumusoro kuruboshwe), Rolls-Royce Phantom VI (pasi kurudyi), Rolls-Royce Phantom VII (pasi kuruboshwe).
paakanga ari Emir, haana kumbobvira ave nechido chekutenga imba sezvo achigara mumuzinda wamambo muKano kudzamara abviswa pachigaro muna Kurume 2020.
Sanusi Lamido Sanusi Chokwadi:
Kuputira yedu Sanusi Lamido Samido biography, heano zvimwe zvishoma-kuzivikanwa chokwadi pamusoro pake izvo zvichakubatsira iwe kuti unzwisise zvakakwana mufananidzo weBio yake.
Akatambura Mwero mumwe chete nasekuru vake:
Haichisiri nhau yekuti Sanusi, nomusi wa9 Kurume 2020 akabviswa paGavhuna weKano state, Gov. Abdullahi Ganduje. Achinyora sekuru vake avo vakapedzisira vakaita saiye saiye, Sanusi akataura;
"Chinhu chokudada icho chakaita kuti titonge uye tigume nenzira yakafanana neya Khalifa."
Kunyangwe Sanusi akagamuchira chimiro chake, akakumbira kudzingirwa kuLagos pachinzvimbo cheNassarawa.
Zvishoma Zvinozivikanwa Zvidzidzo Zvekuita:
Sanusi Lamido akabata degree muArabhu kubva kuyunivhesiti yeSudan. Iyi ndiyo yekutanga dzidziso yaakawana kunze kwenzvimbo dzeNigeria. Zvikuru, akamboshanda seChancellor weYunivhesiti yeBenin (UNIBEN) muNigeria.
Yedu wiki ruzivo ruzivo runobatsira iwe kuwana ruzivo nezveyaimbova Emir nenzira yakapfupi uye yakapusa.
Zita rizere: Sanusi Lamido Sanusi
uye Muhammadu Sanusi II (Royal Royal).
Zita rekudanwa: SLS (zita chidimbu).
Akazvarwa: 31 Nyamavhuvhu 1961 (makore makumi mashanu nemashanu sosvitsa muna Kurume 58), Kano Nigeria.
Vabereki: Hajiya Hafsat Aminu (Amai) uye Muhammad Lamido Sanusi (Baba).
Vana: Khadija Lamido Sanusi, Fulani Siddika Sanusi, Ashraf Sanusi naShahida Sanusi.
Vanun'una: Wambai Sanusi (mukoma wechidiki) naZainab Sanusi (munin'ina).
Vanasekuru: Muhammed Sanusi 1 (muzukuru uye aimbova Emir naKano).
Hama: Muzvinafundo Shehu Galadanci, Muzvinafundo Muhammad Kabir Galadanci, Nura Imam naAllaha Tijjani Sanusi
Dzidzo: Ahmadu Bello University (1981), King's College, Lagos (1977), International University of Africa.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Sanusi Lamido Sanusi Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!